‘राष्ट्रघाती, देश बेचुवा को हो ? टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्‍यो’ – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘राष्ट्रघाती, देश बेचुवा को हो ? टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्‍यो’
एउटा कुरा देशबासी जान्न चाहन्छन् फेरि यो देशमा राष्ट्रघात हुने हो कि ! राष्ट्रघाती कोको हो यो देशमा ? पहिचान गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रघाती को को हो ? देश बेचुवाहरु कोको हुन् ? देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्‍यो, नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ ।कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नेपालको नक्सामा थियो, ५८ वर्ष पहिले । त्यो त हाम्रो जमिन छँदै थियो नि । कुन देशबेचुवाले देश बेच्यो ? स्वेतपत्र खोई जारी गरेको ? स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन ? टुँडिखेलमा राष्ट्रघातीलाई झुण्ड्याउनु पर्दैन ? ढाकछोप गर्ने ?
ऐतिहासिक बैठक-हजारौंपटक संसदको बैठक बसेको छ । तर, आजको बैठक सारा नेपाली जनता, सम्पूर्ण सबै नेपाली जनता टकटकी लगाएर यो संसद बैठक हेरिरहेको छ । सारा नेपाली जनताको प्रतिनिधि यो संसदमा हामी राजनीतिक दलका रुपमा उपस्थित भएका छौं । जनताको प्रतिनिधि त्यो राजनीतिक दलले यो ऐतिहासिक दिनमा के भन्दैछ, के गर्दैछ, त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको जिज्ञासा र ध्यान आजको संसदको बैठकमा छ । संचार माध्यमले पनि आजको बैठक ऐतिहासिक बैठक भनिरहेको थियो । वास्तवमा ऐतिहासिक बैठक नै हो ।
शहरी विकास राज्यमन्त्रीका सल्लाहकारले गरे किशोरीलाई ब’न्धक बनाएर बलात्कार